Vahaolana - Shenzhen Joint Teknolojia Co., Ltd
Mihamaro ny orinasa hanatsara ny fitantanana sy ny ara-drariny sambo fiara mandamina dispatchingwith Fleet Management System, izay tsy mahomby ihany no miantoka ny fiarovana ny fiara sy ny zava-tsarobidy, fa mampihena ihany koa ny vola miasa.
Tsy mizara ny Fleet Management ho telo toko: ny olona, ​​fiara sy ny cargos. Ny "olona" eto dia ahitana ny mpamily sy passengers.We mahomby dia afaka hanara-maso ny fiara sy ny fiara fampisehoana fotoana ny mpamily amin'ny mahomby mitambatra RFID teknolojia, fakan-tsary sy ny GPS terminal. Koa dia afaka mahomby antoka ny fiarovana ny mpamily ny fanairana sy ny loza fanairana.
Fleet Management: Afaka manara-maso isan-karazany Informations about fiara ara-potoana, ka hanome ny mpanjifa amin'ny fanompoana marina ny fiara QUERY 'location.The fiara mahomby azo Naniraka rehefa nahalala mazava tsara ny hetsika ankehitriny ny fiara. Koa dia afaka mahafantatra mazava tsara ny toerana fikojakojana ny fiara. Afaka manao lalana-drafitra ho an'ny fiara mialoha, ary koa ny manao ny tsipiriany fitaterana drafitra fitantanana.
Management-pananana: hanara-maso ny toe-javatra mandeha ny finday-pananana teny an-dalana tamin'ny alalan'ny fakan-tsary teknolojia, varavarana andriamby induction teknolojia, Bar-fehezan-dalàna scanning teknolojia, RFIDtechnology, GPS teknolojia, Wireless fifindran'ny teknolojia, sns, mba hahazoana ny fitantanana mahomby lahateny, izay afaka tsara fa sarobidy tsy fananan'ny dia nangalatra, nandroba sy very.
Manatsara ny sambo
efficiencies sy ny profitability
andraikitra sy ny loza mety hitranga
1.The sehatra fitantanana manohana 10 languages2.Real andro fanaraha-maso sy ny ara-tantara review3.Route ampy fandrindrana / faritra fandrindrana 4.Vehicles 5.Real-miasa mitatitra fotoana Alarms sy Alarm tatitra.
Ilaina mifanandrify Hardware Products
Details mamaritra ny toetra, fitanana mamoaka ny marika
Fitaterana Fleet Logistics Management Vahaolana
Bus School Fleet Management Vahaolana
Post Transport Fleet Management Vahaolana
Refrigerated Fitaterana Fleet Management Vahaolana
Taxi Fleet Management Vahaolana